July Dream: Match making
Match making ဆိုတာမြင်တာနဲ့ ဒုန်းပြေးလာတာ။ ကယ်ပါဦးဆရာဂျူလိုင်ရယ်။
ကျွန်တော်လဲ တရုတ်မလေးတစ်ယောက်ကို ကြိုက်မိတာ ငါးပါးမှောက်နေလို့။
ဗျာ... ကျွန်တော်လည်း မကယ်နိုင်ဘူး ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း တရုတ်မလေးပဲ ကြိုက်တာ ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်က ငါးပါးတင် မကဘူး ၁၈၁၈ လည်း မှောက်တယ်။ ဘောနပ်စ်လည်း မှောက်တယ်။ အိမ်မှာ အပေါဆုံးက ဖုန်းကဒ်တွေ ဖြစ်နေပြီဗျာ။
ရော် ဟိုက သူ့ကယ်ခိုင်းတာ သူကပါရောပြီး ညည်းပြနေတယ်.. အင်း ကြွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ.. သူက ဂါလီစီးတဲ့ ဝက်သိုးမဟုတ်ကြောင်း.. ဒါနဲ့ စကားပုံပြောင်းဦးမှ..
ဝက်သိုး ကြိုးပြတ်ဆိုပြီး ;P :D
ပြီးခဲ့တဲ့ post မှာ 2010 မျှော်တယ်ဆိုတာက ဒီကိစ္စနဲ့များ ဆိုင်နေလေမလား။
ခုတလော post တွေ ဖတ်ပြီးရင် သီချင်းတွေ ခေါင်းထဲရောက်ရောက်နေတယ်။
ကို july ရေးတာ ဖတ်ပြီး ဗဒင် သီချင်းတောင် သတိရလိုက်သေး။ "တို့နှစ်ယောက်ထက်ပဲ ဗေဒင်ဆရာဟာ ပိုသိနိုင်မလား" ဆိုတာ။ ဒီအတိုင်းသာ ဆင်းသွားလိုက်ပါ ကို july ရယ်။
ကျွန်မက မျောက် နှစ်ဖွား။ ဆိုတော့ ဒီ post ထဲက အဖိုးလိုဆို ဒီကောင်မလေး ငြိမ်ငြိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ပယ်ခံရနိုင်တယ်
တို့က ဓမ္မာသောက အင်းဝရာဇာ ထဲကနဲ့ယူပါတယ။် အဆင်ပြေလိုက်သမှ ပြေပါတယ။် ယူတုံးကတော့ခပ်ကြောက်ကြောက်ဘဲ. .ယူချင်တာနဲ့ယူလိုက်တယ်။ ကိုယ်က ယူချင်တာကိုး။ ဘာမှပြသာနာမရှိပါဘူး.
အဲဒီအမျိုးအကိုရော ဘာနှစ်ဖွားလဲ ပြောပြ... တို့မှာလဲ တူမတွေ ရှိနေတယ် ဟဟ
ကလေးတွေ အတုယူမှားနေမယ် ... သူတို့လဲ အရူးအမဲသားစားမိ (ဟမ်းးးး)
လူပျိုကြီးတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေတာကို မနာလိုသူ :D
Yeah! that is the rule of chinese family. I am facing this problem :(
just revising old-time lesson. :D
ဗေဒင်ဆရာကို တိုင်ပင်ပါ။ ဗေဒင်ကို ဗေဒင်နဲ့ ပြန်တိုက်ပါ။ ကောင်းကွက်ဆိုတာ ရှာရင် ရပါတယ်။ ဗေဒင်ဆရာကို လိုချင်တာ ကိုယ့်ဖက် ဆွဲဟောခိုင်းလို့ ရပါတယ်။
hi 5! အစ်ကို 100% Agree! ;)
ဒီပိုစ့်လေးကို ကော်ပီကူးပြီးသိမ်းထားတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးလုံးရ သူများကိုလည်း ဖောလိုရ အဲ ရှင်းပြလို့ရအောင်လို့ပါ...
ကို ဂျုလိုင် ရေ
ဒါဆို မေလေး ကတော့ နတ်သမီးနဲ့ တူသော မယား ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ (ကြုံကြွား) ချစ်သူက ကြည်နူးရိပ်မှာ လာနေရင် ပြောပါတယ်...
တရုတ်မလေးကို ကြိုက်တာ ဘာလို့ ငါးပါးမှောက်တာ လဲ မေလေးလဲ တရုတ်မ စစ်စစ် နော် ရေတောင် မရောဘူး
မြန်မာပြည် က တရုတ်မလေးတွေက စိတ်ထားနူးညံပါတယ်နော်
ဗေဒင်ဆိုတာက မမှန်၊ မှန် ဆိုတာ တိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှ သိတတ်တယ်။
တိုင်ဆိုင်မှု မရှိရင် မမှန်ဘူးပဲ။
ဘောင် ဆိုတာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဘာသာ ချုပ်တဲ့ အကျဉ်းထောင်ပါ။
မင့် တရုတ်မလေး က ဘာနှစ်ဖွားတုန်း..း)
အမှန်ပဲ၊ အခုခေတ်မှာတော့ ဒါမျိုးတွေ မရှိသင့်တော့ပါဘူး။ ခွေးနှစ်ဆိုတာနဲ့ မယူရဲဘူးဆိုတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အရာကို သူတို့ မေ့များ သွားသလား။
ကိုဂျူလိုင်ကတော့ အမေကဖြင့် မကန့်ကွက်ရသေး၊ ဘုန်းကြီး ပြေးမေးထားပြီဆိုတဲ့ အပေါက်ပဲ။ အမတို့လဲ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဗေဒင်တွေ ဘာတွေ ဘာမှကို မမေးဘူး အေးရော။ ကိုယ့် စိတ်ချမ်းသာမှုကို သူတို့က ကိုယ့်ထက် ပိုသိနိုင်မှာမို့လို့လားလေ။
ကိုဂျူလိုင်လည်း နတ်သမီးနဲ့တူသော . . . အမျိုးသမီးနဲ့ မြန်မြန်အဆင်ပြေပါစေရှင်
ဟားဟား ဝက်လောကကို roll မြှင့်ပေးတဲ့ ကိုဂျူလိုင်ပဲ
ဒီပို့စ်ကို အကိုဝမ်းကွဲဖတ်မိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
တယ်လဲ အမြော်အမြင်တွေကြီးနေပါလား။ ကြိုကန်လို့ရအောင် ခုထဲက အချက်အလက်တွေ ရှာနေတယ်ပေါ့။ ခွိခွိ
ကိုဂျူလိုင်ရေ.. ကျမတို့က လင်မယားက အင်းဝ ပဲ... သူများတွေကပြောကြတယ်.. တနင်္ဂနွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးယူရင် အုန်းတောင်မနွေးဘူးတဲ့ .. အယူအဆမရှိလို့ ယူလိုက်တာပဲ ... ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ အခုဆို သမီးနှစ်ယောက်တောင် တော်တော်ကြီးနေပါပြီ... ဆရာတော်ပြောတာအမှန်တရားပါပဲ... တယောက်နဲ့တယောက် နားလည်မှုက အဓိကပဲလေ..
အိမ်မှာ အပေါဆုံးက ဖုန်းကဒ်တဲ့။
သာမီးတို့ကတော့ ဒီလိုပဲ ဗေဒင် နေ့နံမမေးပဲ ယူပစ်လိုက်တာပဲ....။
ထိုင်းမှာလည်း ဟိုနိုင်ငံက မြန်မာမစွံကြီးတွေ လာလာရှာကြတယ် ပါပါသွားကြတာတွေရှိတယ် နောက် မြန်မာပြည်က မိဘတွေ လာပို့ပေးတာလဲ ရှိတယ်တဲ့ ရယ်ရတယ်နော်
ခုမှ ခုမှ အယူမသီးနဲ့လေးဘာလေးနဲ့...
အရင်ကသာ အခုလို အသိလေး စောစောရခဲ့ရင် ချိန်သီး၊ ပေပင် ဘ၀က လွတ်လောက်ရောပေါ့ကွယ်...
မင့် မာမား ပြောစကားနားထောင် ကောင်လေး၊ မမှားဘူးပေါ့ကွယ်... ငှက် ငှက်...
အဲဒီလင်္ကာလေးဟာ ဗေဒင်ကိန်းခန်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဌာနပမာဏရန် တနည်းအားဖြင့် ခိုင်မြဲရှည်ကြာသော၊ အင်အားပြင်းထန်သော ရန်တွဲတွေကို စပ်ဆိုထားတဲ့ လင်္ကာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးဖို့ သုံးတယ်ဆိုတာ ဗေဒင်ပညာကို ရှေးထုံးစဉ်လာနဲ့၊ ရောထွေးယူဆသွားတဲ့အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဥပမာ ကျနော်တို့ မြန်မာ့ရိုးရာ သုံးတန်ပေါ်နိစ်မှာ၊ နောက်.. ဆန်းကျမ်းဗေဒင်မှာ အဲဒီရန်တွဲတွေ အင်းဝဆိုပါတော့။ အဲဒီ အင်းဝ ၁-၄ အတွဲဟာ နိစ်၊ ပြဌာနဆိုးတွေမှာ ရပ်တည်လာတဲ့အခါ ရန်များတာ၊ အတိုက်အခံပြုတာ၊ အင်အားကြီးမားတဲ့ရန်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာတွေ ကြုံလာရတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလင်္ကာလေးဟာ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးတာနဲ့ တိုက်ရိုက်မပက်သက်တဲ့အပြင်၊ ဒီလင်္ကာတစ်ခုကိုပဲ နူတ်ထဲစွဲပြီး၊ မတည့်ဘူး။ မယူနဲ့။ ဝေးဝေးရှောင်။ .. လို့ ဆိုခဲ့ရင် ဒါသာ လုံးဝအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အယူအဆသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဗေဒင်ပညာမှာ ဥစ္စာလို ရန်ဂြိုဟ်ရှာဆိုတဲ့ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ပညာခန်းလေးတစ်ခုလဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီ ဓမာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ မတည့်ဘူး လို့ လာပြောခဲ့ရင်.. ကိုဂျူလိုင်ရေ။ ကျနော်ပြောသလို စီးပွား ဥစ္စာတွေ ဖြစ်ထွန်းအောင် ရန်ဂြိုဟ်ရှာတဲ့အနေနဲ့ ရန်နံကျနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို တစ်သက်စာ လက်တွဲမယ်နော်။ လို့သာ ပြန်ရှင်းပြလိုက်ပါတော့ဗျာ။ အော်.. အဲဒီလင်္ကာလေးအပေါ် ပုံသေစွဲလို့ မရဘူးလို့ ရှင်းပြလိုက်တာနဲ့ ဗေဒင်ပညာအားလုံးဟာ အာပလာလို့လည်း မယူလိုက်ပါနဲ့ဦးနော်။ တကယ်တမ်း အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးမယ်ဆိုရင် ဟိန္ဒူနက္ခတ်ပညာမှာ စည်းကမ်းချက်ပေါင်း ၁၂ ချက်တောင်မှ ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါကတော့ ဇာတာချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် နောင်မှ အသေးစိတ်ပြောဖြစ်ပါတော့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ မြန်မာတွေ နူတ်စွဲနေတဲ့ လင်္ကာတော်တော်များများဟာ အပေါ်ယံအထင်အမြင်တွေနဲ့ လားလားမှ မဆိုင်ဘဲ နက်နဲတဲ့ပညာတွေရဲ့ လမ်းစတွေကို မျက်စပစ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်းးးး။
မရီတာတော့ ချိန်နေပြီ :P
ဟိုက်..... ကိုဂျူလိုင်ပြောမှ ဝက်ဖြစ်ချင်လာပြီ။
ကဲလာထား..... ကျွန်တော်လဲ အယူမသီးတဲ့ဝက်..... :P
၁၈၁၈ ကဒ်တွေပုံနေတယ်ဆိုပဲ ..ကဒ်နဲ့ တခုခုလဲလို့၇ခဲ့ရင် ညီမကိုလည်းပြောပါ ညီမဆီမှာလည်း၁၈၁၈ ကဒ်တွေအများကြီးရယ် .. ဗေဒင်နဲ့အမေ ပြောတာသာနားထောင်ရရင် လုံးဝသေချာပါတယ် အပျိုကြီးဖြစ်ပြီ :)
ကောင်းတယ်ဗျာ..အစ်ကို...း)..ဒါနဲ့ အစ်ကိုကော ၀က်သိုးကြီးထက် သာပြီလား.. ဟီးဟီး.....
သြော် ... မယူချင်တဲ့လူတွေ အကြောင်းရှာလို့ရအောင် ထားထားစမ်းပါဦး။ အသေမတိုက်ဖျက်လိုက်ကြပါနဲ့။
ပေးမယ် ပြောထားတာလေး လာပို့ တယ်နော်။
ကောင်းပါ့ဗျာ.. ဟုတ်တယ်ဗျ အထူးသဖြင့် မြန်မာတွေ အရမ်းအယူသီးတတ်ကြတယ် ခေတ်နောက်ကျတာလဲ ပါချင်ပါမှာပေါ့၊ ခုခေတလူငယ်တွေကတော့.... အင်း ..ခေတ်မှီ
တယ်ပေါ့ဗျာ... တချို့ဆို လွန်တောင်လွန်နေကြတာဗျ...။
မီးမီးတို့ကလည်း ကြိုက်ပြီဆိုမှတော့ ဗေဒင်မမေးပဲယူ
လိုက်တာပဲ.. မလိုဘူးလားလို့..း)))
ဓမ္မ သောကလည်း မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး..
နားလည်ခြင်းနဲ့စာနာ ညှာတာခြင်းကိုပဲ ယုံကြည်ခဲ့တာ..
ဗေဒင်တောင်မမေးခဲ့ဘူး ယူခဲ့တား)
ဗေဒင်သာယုံနေရရင်တော့... ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူး.... :(
တွေးတတ်လိုက်တာနော် . ဘာပဲပြောပြောဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်